चीनले आफ्ना नागरिकलाई नोभेम्बरदेखि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन दिने – Saurahaonline.com
चीनले आफ्ना नागरिकलाई नोभेम्बरदेखि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन दिने
सिडिसी प्रमुख गुइजेनले भनेका छन्, ‘हामीले नोभेम्बरदेखि खोपलाई आम मानिसका लागि दिन थाल्नेछौँ । ढिलो भएमा पनि डिसेम्बरको सुरुवातमा हामीले खोप दिनेगरी सबै तयारी पूरा गरेका छौँ । क्लिनिकल परीक्षणहरु सबै सफलताको नजिक पुगेका छन् । हामी सबैभन्दा अगाडि बढ्ने छौँ ।’
डा. गुइजेनले पनि अप्रिल महिनामा एक स्वयंम् सेवकको रुपमा खोप लगाएका थिए । उनी भन्छन्, ‘मलाई अप्रिल महिनामा एउटा स्वयंम् सेवकको रुपमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाइएको थियो । मेरो स्वास्थ्य राम्रो छ । यो खोपले ३ वर्षसम्म प्रभावकारीरुपमा काम गर्छ ।’
ग्लोबल टाइम्सका अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य आयोग र मातहतका विभिन्न निकायले अहिले भ्याक्सिनका अध्ययन गरिरहेका छन् । डा. गुइजेन भन्छन्, ‘कोरोना भाइरस उच्च जोखिमयुक्त भाइरस हो । कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन पनि नकरात्मक वातावरणमा उत्पादन गर्न आवश्यक हुन्छ । अहिले विभिन्न विषयमा गहन अध्ययन तथा कार्यशालाहरु भइरहेका छन् । समीक्षा सकिएपछि अनुमोदन हुनुपर्छ । अहिलेसम्म भएका मूल्याङ्कन सफलतातर्फ छन् । तेस्रो चरणको परीक्षणपछि हामी जनतालाई ढुक्कले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन दिन सक्षम हुनेछौँ ।’